Global Voices teny Malagasy » Bahrain: Hanina An’i India · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jona 2017 4:26 GMT 1	 · Mpanoratra Ayesha Saldanha Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Bahrain, India, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tsidika
Maro ny Bahrainita mianatra eny amin'ny oniversite sy kolejy ao India, ary iray amin'izy ireo ilay bilaogera antsoina hoe MuJtAbA AlMoAmEn. Vao haingana izy no nanoratra momba ny fihetseham-pony mikasika ny hanina an'i Bahrain tamin'izy tany India – sy ny faniriany hiverina any India taorian'ny fialan-tsasatra lava be tao Bahrain.
Namariparitra i MuJtAbA fa nandeha ny fotoana hatramin'ny niverenany tao Bahrain mba hiala-sasatra  [Ar]:
Nandeha haingana mampivarahontsana ny fotoana. Tapitra ny volana voalohany nijanonako tao Bahrain, tahaka ny tsy fiainako izany. Nihaona tamin'ireo namako taloha sy vaovao aho. Nanomboka moramora ny volana faharoa. Tapitra izany, tonga ny volana fahatelo, somary miadana sy mafimafy, indrindra rehefa mandinika ireo olana sasany izay tsy afaka amin'ireo monina ao amin'ity tany ity.
Nanazava izy avy eo hoe nahoana izy no nieritreritra loatra momba an'i Bahrain tamin'ny fiandohan'ity taona ity-ary ahoana no nataony:
Tsaroako ireo andro sarotra tamin'ny volana Desambra , izay nandalovako tamin'izaho tao India. Nangirifiry sy nahasorena izany. Tahaka ny olona adala aho ary tsy afaka natory nandritra ny adin'ny telo mahery tamin'ny alina satria nijery aterineto aho mba hanaraka ny fivoarana farany eny ifotony. Tamin'izany ny Bahrain Online  no lasa namako any ivelany. Na dia nahitana vaovao manitatra aza ao, dia ahitana vaovao marobe ihany koa.
Tapitra ny fialan-tsasatra ankehitriny, ary niverina tao India mandritra ny roa taona manaraka izy mba hanohy ny fianarany – mitantara ny fiverenany izy:
Niverina tao India mba hiaina karbonina sy rivotra maloto aho, sy hiaina fitohanan'ny fifamoivoizana, hanatri-maso ny fahantrana farahidiny izay iaretan'ny Indiana marobe, hankafy ny fankalazana mandritra ny taona ary hanampina ny sofiko amin'ireo hira Indiana tsy ankitsahatra sy tsy mahafantatra fotoana ho an'ny fitsaharana.
Nilaza lafim-piainana sasany nankafiziny tao India izy, ary koa ireo zavatra tsy nampoiziny:
Niverina tao India aho mba hanatri-maso ny fandeferana ara-pivavahana, sy hanalavitra ny fanilikilihana ara-pivavahana; sy hampiala sasatra ny tenako izay reraky ny tranga mampalahelo iaretan'ny firenena sy izay ahitako ny manirery ho namako akaiky kokoa. Hitako fa mahafinaritra kokoa sy mafy kokoa noho ny trano izany. Niverina tamin'ny korontana eny amin'ny asa birao sy ny dingana mankaleo eny amin'ny oniversite sy ny Minisiteran'ny Atitany, sns aho. Niverina ho any amin'ny tontoloko aho, izay nahitako fahanginana sy fahafahana mamaky teny sy mianatra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/24/102462/